ပုရိသတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဗလောင်ဆူ သွားအောင် အလန်းစား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ နန်းမွေ့စံ – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / ပုရိသတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဗလောင်ဆူ သွားအောင် အလန်းစား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ နန်းမွေ့စံ
ပုရိသတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဗလောင်ဆူ သွားအောင် အလန်းစား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ နန်းမွေ့စံ
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ က တော့ အနုပညာလောက ထဲကို ရူးသွပ် စွာ ဝင်ရောက် လာခဲ့ ပြီး အချိန် ခဏ လေးအတွင်း မှာ အောင်မြင်မှု တွေ များစွာ ရရှိထားသူ တစ်ယောက်ပါ ။ သူမဟာ ဆိုရင် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး ယခု အချိန်မှာ အနုပညာ အလုပ်တစ်ခု ထဲကိုသာ တစ်စိုက် မတ်မတ် လုပ်ကိုင် နေတာ ကို တွေ့ ရပါ တယ် ။
နန်းမွေစံ က သူမ ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တရားတွေ ကို လှစ်ဟာ ပြသ လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး သူမ ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာဆိုရင် လူမှု ကွန်ယက် အသုံးပြု သူ တွေကြားထဲမှာ အ တော်လေး ရေပန်းစား အောင်မြင်နေ တာပဲဖြစ် ပါ တယ် ။ မကြာ ခဏဆိုသလို လည်း ဆိုရှယ် မီဒီယာ ထက်မှာ ပုံရိပ် အလန်းလေးတွေ ကို ဝေမျှ လေ့ရှိတဲ့ နန်းမွေစံ က ယနေ့မှာ လည်း ပိုစ့် တစ်ခု တင်ပေး လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒါက တော့ ” မောင် ! ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ” ဆိုတဲ့ စာသား လေး အပြင် ကြည့်မိ သူတိုင်း ရင်ကို ထိမိသွားရ လောက်အောင် ကောက်ကြောင်း အလှတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေး လာတာပါ ။ ချစ် ပရိသတ် တွေ အချစ်ပိုစေရန် အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။ ကဲ…ပရိသတ်တွေ ကလည်း ပုံလေး တွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေး တွေ ပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ လိုက် ပါနဲ့ နော် … ။
ပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျလျ နနျးမှစေံ က တော့ အနုပညာလောက ထဲကို ရူးသှပျ စှာ ဝငျရောကျ လာခဲ့ ပွီး အခြိနျ ခဏ လေးအတှငျး မှာ အောငျမွငျမှု တှေ မြားစှာ ရရှိထားသူ တဈယောကျပါ ။ သူမဟာ ဆိုရငျ ဆရာဝနျ တဈယောကျဖွဈ ပွီး ယခု အခြိနျမှာ အနုပညာ အလုပျတဈခု ထဲကိုသာ တဈစိုကျ မတျမတျ လုပျကိုငျ နတော ကို တှေ့ ရပါ တယျ ။
နနျးမှစေံ က သူမ ရဲ့ စှဲမကျဖှယျ ကောကျကွောငျး အလှ တရားတှေ ကို လှဈဟာ ပွသ လရှေိ့သူဖွဈပွီး သူမ ရဲ့ အလနျးစား ပုံရိပျလေးတှေ ဟာဆိုရငျ လူမှု ကှနျယကျ အသုံးပွု သူ တှကွေားထဲမှာ အ တျောလေး ရပေနျးစား အောငျမွငျနေ တာပဲဖွဈ ပါ တယျ ။ မကွာ ခဏဆိုသလို လညျး ဆိုရှယျ မီဒီယာ ထကျမှာ ပုံရိပျ အလနျးလေးတှေ ကို ဝမြှေ လရှေိ့တဲ့ နနျးမှစေံ က ယနမှေ့ာ လညျး ပိုဈ့ တဈခု တငျပေး လာခဲ့ပါတယျ ။
ဒါက တော့ ” မောငျ ! ဘာတှေ လုပျနလေဲ ” ဆိုတဲ့ စာသား လေး အပွငျ ကွညျ့မိ သူတိုငျး ရငျကို ထိမိသှားရ လောကျအောငျ ကောကျကွောငျး အလှတှပေျေါလှငျ နတေဲ့ ပုံလေးတှေ ကို တငျပေး လာတာပါ ။ ခဈြ ပရိသတျ တှေ အခဈြပိုစရေနျ အတှကျ ပွနျလညျ တငျဆကျပေးလိုကျ ပါတယျနျော ။ ကဲ…ပရိသတျတှေ ကလညျး ပုံလေး တှကေို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေး တှေ ပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ လိုကျ ပါနဲ့ နျော … ။
Previous post မြင်တဲ့သူတိုင်း နှလုံးသားတွေ ကြွေသွားစေ လောက် တဲ့ ဘုံဘုံလေးရဲ့ အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ VIDEO
Next post သူမကို ချစ်ရေးဆိုကြတဲ့ ထိပ်တန်း လူ(၅)ယောက်ထဲတွင် အနုပညာရှင် (၂)ယောက်ပါဝင်ကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မမဆောင်း